စက်ဆွဲစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကိုပျော့ပျောင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း... - MM Daily Life
စက်ဆွဲစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကိုပျော့ပျောင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း…
September 28, 2020 by MM Daily Life
မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများက ဆံပင်ကို ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက်လုပ် ကြတာများပါတယ်။ တချို့က ဆံပင်ရေလှိုင်းပုံလေးတွေ လုပ်တာကို ကြိုက်ကြတယ်။တချို့ကျ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြောင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို စက်နဲ့ဆွဲပြီးလုပ်ရတာမလို့ ဆံကေသာကို အနည်းနဲ့ အများတော့ ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ် …။
အဲ့လိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ဆံကေသာကို ဖြောင့်စင်းချင်သူများအတွက် သဘာဝအတိုင်း ပေါင်းတင်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် ။ ပေါင်းတင်တာဆိုတဲ့အတွက် ခေါင်းလျှော်သလို လျှော်လို့မရပါဘူး။ဆံကေသာမှာ နှံအောင်လိမ်းထားပြီးမှ အချိန်တစ်ခုထားပြီး လျှော်ရမှာပါာပထမဆုံး ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ ပြောပြပါမယ် …။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း လေးတွေကတော့….
– ပျားရည် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ဆံပင်အတိုအရှည်ပေါ်မူတည်ပြီး ချင့်ချိန်ပြီးရောစပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ကြက်ဥကို လိုသလောက် ဖောက်ပြီးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရှားစောင်းလက်ပက်ကို အထဲက အနှစ်တွေ ထုတ်ပြီးတော့ ကြက်ဥနဲ့ ရောမွှေပါ။ ပြီးရင် သံလွင် ဆီရယ် ပျားရည်ရယ်ကိုပါထပ်ထည့်ပြီး နှံ့အောင် မွှေပေးပါ။ ရောပြီးသွားပြီဆိုရင် ဆံကေသာကို လိမ်းလို့ရပါပြီ …။
သေချာနှံ့အောင်လိမ်းပြီး ဖြေးဖြေးချင်းလိမ်းပေးပါ။ပြီးရင် နာရီဝက်လောက် ပေါင်းခံထားပြီးတော့ ရေနဲ့ဆေးချပြီး လျှော်လိုက်တာနဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံကေသာကို ရရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံကေသာပျော့ပျောင်းစေရုံ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဆံပင်နှစ်ခွ ဖြစ်တာကိုပါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုထပ်ထည့်လို့ရတာက ဆံပင်ကျွတ်တတ်တဲ့ သူဆို သံပုရာရည်ပါ ထပ်ထည့်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် …။ ။
Credit to Myanmar Platform
စကျဆှဲစရာမလိုပဲ ဆံပငျကိုပြော့ပြောငျးသှားစမေယျ့ နညျးလမျး…
မိနျးကလေးတှတေျောတျောမြားမြားက ဆံပငျကို ကောကျလိုကျဖွောငျ့လိုကျလုပျ ကွတာမြားပါတယျ။ တခြို့က ဆံပငျရလှေိုငျးပုံလေးတှေ လုပျတာကို ကွိုကျကွတယျ။တခြို့ကြ ဖွောငျ့စငျးနတေဲ့ ဆံပငျကို ကွိုကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကောကျတာပဲဖွဈဖွဈ ဖွောငျ့တာပဲဖွဈဖွဈ ဆံပငျကို စကျနဲ့ဆှဲပွီးလုပျရတာမလို့ ဆံကသောကို အနညျးနဲ့ အမြားတော့ ပကျြဆီးစနေိုငျပါတယျ …။
အဲ့လိုမြိုးတှေ မဖွဈရအောငျ ဆံကသောကို ဖွောငျ့စငျးခငျြသူမြားအတှကျ သဘာဝအတိုငျး ပေါငျးတငျနညျးလေးကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျနျော ။ ပေါငျးတငျတာဆိုတဲ့အတှကျ ခေါငျးလြှျောသလို လြှျောလို့မရပါဘူး။ဆံကသောမှာ နှံအောငျလိမျးထားပွီးမှ အခြိနျတဈခုထားပွီး လြှျောရမှာပါာပထမဆုံး ဘာတှလေိုအပျလဲဆိုတာ ပွောပွပါမယျ …။
လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျး လေးတှကေတော့….
– ပြားရညျ တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ဆံပငျအတိုအရှညျပျေါမူတညျပွီး ခငျြ့ခြိနျပွီးရောစပျဖို့တော့လိုပါတယျ။ ပထမဆုံး ကွကျဥကို လိုသလောကျ ဖောကျပွီးထညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ ရှားစောငျးလကျပကျကို အထဲက အနှဈတှေ ထုတျပွီးတော့ ကွကျဥနဲ့ ရောမှပေါ။ ပွီးရငျ သံလှငျ ဆီရယျ ပြားရညျရယျကိုပါထပျထညျ့ပွီး နှံ့အောငျ မှပေေးပါ။ ရောပွီးသှားပွီဆိုရငျ ဆံကသောကို လိမျးလို့ရပါပွီ …။
သခြောနှံ့အောငျလိမျးပွီး ဖွေးဖွေးခငျြးလိမျးပေးပါ။ပွီးရငျ နာရီဝကျလောကျ ပေါငျးခံထားပွီးတော့ ရနေဲ့ဆေးခပြွီး လြှျောလိုကျတာနဲ့ ပြော့ပြောငျးတဲ့ ဆံကသောကို ရရှိလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆံကသောပြော့ပြောငျးစရေုံ မဟုတျပဲနဲ့ ဆံပငျနှဈခှ ဖွဈတာကိုပါ ပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။ တဈခုထပျထညျ့လို့ရတာက ဆံပငျကြှတျတတျတဲ့ သူဆို သံပုရာရညျပါ ထပျထညျ့ပွီး အသုံးပွုလို့ရပါတယျနျော …။ ။
ချစ်သူရည်းစားအနေနဲ့တောင် မရွေးချယ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်(၅)မျိုး
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့အရောင်က တစ်ဆင့်သိနိုင်မယ့် သားအိမ်ကျန်းမာရေး
ကြက်ဥ၊သံပုရာသီးအမှည့်၊သကြား ဒီသုံးမျိုးကို မယုံရင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ… April 17, 2021
ဖြေရခက်မှာစိုးလို့ ချစ်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေတောင်မမေးဖြစ်တော့ဘူး… April 16, 2021
သစ္စာမဖောက်ရုံနဲ့ ပြီးပြီလား…? April 16, 2021